Ahene Nhoma a Edi Kan 1:1-53
Dawid ne Abisag (1-4)
Ná Adoniya pɛ sɛ odi hene (5-10)
Natan ne Bat-Seba yɛɛ asɛm no ho biribi (11-27)
Dawid kae sɛ wɔnsra Solomon ma onni hene (28-40)
Adoniya guan kɔɔ afɔremuka no anim (41-53)
1 Ná Ɔhene Dawid abɔ akwakoraa+ na wadi nna pii; sɛ wɔde ntama pii kata ne ho mpo a, na ne ho nyɛ no hyew. 2 Enti ne nkoa ka kyerɛɛ no sɛ: “Ma yɛnhwehwɛ ababaa bi a ɔyɛ ɔbaabun mmrɛ yɛn wura ɔhene na ɔmmɛtena ɔhene ho nhwɛ no; ɔbɛda wo nkyɛn na yɛn wura ɔhene ho ayɛ no hyew.” 3 Ɛnna wokokyin hwehwɛɛ Israel asaase nyinaa so sɛ wobenya ababaa bi a ne ho yɛ fɛ. Na wokohuu Sunemni+ Abisag+ de no brɛɛ ɔhene. 4 Ná ababaa no ho yɛ fɛ papaapa. Ɔbɛtenaa ɔhene ho hwɛɛ no, nanso ɔhene ne no anna. 5 Saa bere no nyinaa, na Hagit ba Adoniya+ rehoahoa ne ho sɛ: “Me na medi hene!” Na ɔma wɔyɛɛ teaseɛnam maa no, na onyaa nkurɔfo a wɔtete apɔnkɔ so ne mmarima 50 a wotu mmirika di n’anim.+ 6 Nanso ne papa anka n’anim* sɛ: “Adɛn nti na woreyɛ saa?” Ne maame woo no wɔ Absalom akyi, na na ɔno nso ho yɛ fɛ paa. 7 Adoniya de Seruia ba Yoab ne ɔsɔfo Abiatar+ yɛɛ ne nkurɔfo a ɔne wɔn fa adwene, na wɔbɛyɛɛ n’akyitaafo a wɔboa no.+ 8 Ɔsɔfo Sadok,+ Yehoiada ba Benaia,+ odiyifo Natan,+ Simei,+ Rei, ne Dawid akatakyi+ no de, wɔankodi Adoniya akyi. 9 Afei da bi, Adoniya de nguan, anantwi, ne mmoa a wɔadɔ srade bɔɔ afɔre+ wɔ Sohelet botan a ɛbɛn En-Rogel no ho, na ɔfrɛɛ ne nuanom, ahenemma no nyinaa, ne Yuda mmarima a wɔyɛ ɔhene nkoa no nyinaa. 10 Nanso odiyifo Natan, Benaia, ne akatakyi no ne ne nua Solomon de, wamfrɛ wɔn. 11 Ɛnna Natan+ ka kyerɛɛ Solomon maame+ Bat-Seba+ sɛ: “Woate sɛ Hagit ba Adoniya+ abɛyɛ ɔhene bere a yɛn wura Dawid nnim ho hwee anaa? 12 Enti bra ma mintu wo fo, na gye wo ho ne wo ba Solomon nkwa.*+ 13 Kɔ Ɔhene Dawid nkyɛn na kobisa no sɛ, ‘Me wura ɔhene, ɛnyɛ wo na wokaa w’afenaa ntam? Ɛnyɛ wo na wokae sɛ: “Wo ba Solomon na obedi m’ade ayɛ ɔhene, na ɔno na ɔbɛtena m’ahengua so”?+ Ɛnde ɛyɛɛ dɛn na Adoniya abɛyɛ ɔhene yi?’ 14 Bere a wugu so ne ɔhene rekasa wɔ hɔ no, me nso medi akyi aba na mabɛka bi ato w’asɛm no so.” 15 Enti Bat-Seba kɔɔ ɔhene nkyɛn wɔ pia mu. Ná ɔhene abɔ akwakoraa posoposo, na Sunemni Abisag+ te ɔhene ho rehwɛ no. 16 Ɛnna Bat-Seba bɔɔ ne mu ase kotow ɔhene anim, na ɔhene bisaa no sɛ: “Dɛn na wopɛ sɛ meyɛ ma wo?” 17 Ɔno nso kae sɛ: “Me wura, wo na wokaa w’afenaa ntam wɔ Yehowa, wo Nyankopɔn din mu sɛ, ‘Wo ba Solomon na obedi m’ade ayɛ ɔhene, na ɔno na ɔbɛtena m’ahengua so.’+ 18 Nanso hwɛ sɛ Adoniya abɛyɛ ɔhene bere a me wura ɔhene nnim ho hwee!+ 19 Ɔde anantwinini ne mmoa a wɔadɔ srade ne nguan pii abɔ afɔre, na wafrɛfrɛ ahenemma no nyinaa ne ɔsɔfo Abiatar ne ɔsahene Yoab,+ nanso w’akoa Solomon de, wamfrɛ no.+ 20 Me wura ɔhene, wo na Israel nyinaa ani da wo so sɛ wobɛkyerɛ wɔn nea obedi me wura ɔhene ade na watena n’ahengua so. 21 Anyɛ saa a, sɛ me wura ɔhene ne n’agyanom kɔda pɛ, wobebu me ne me ba Solomon sɛ yɛyɛ atuatewfo.”* 22 Bere a ogu so ne ɔhene rekasa no, odiyifo Natan baa hɔ.+ 23 Ɛhɔ ara na wɔka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “Odiyifo Natan aba ha!” Ɔbaa ɔhene anim bɛbɔɔ ne mu ase de n’anim butuw fam wɔ ɔhene anim. 24 Ɛnna Natan kae sɛ: “Me wura ɔhene, enti wo na wokae sɛ, ‘Adoniya na obedi m’ade ayɛ ɔhene, na ɔno na ɔbɛtena m’ahengua so’ anaa?+ 25 Ɛnnɛ ɔde anantwinini ne mmoa a wɔadɔ srade ne nguan pii rekɔbɔ afɔre.+ Na wafrɛfrɛ ahenemma no nyinaa ne asahene no ne ɔsɔfo Abiatar;+ wɔne no ato nsa redidi na wɔrenom, na nea wɔreka ara ne sɛ, ‘Ma Ɔhene Adoniya nnya nkwa tenten!’ 26 Na me, w’akoa, me ne ɔsɔfo Sadok ne Yehoiada ba Benaia+ ne w’akoa Solomon de, wamfrɛ yɛn. 27 Me wura ɔhene, wo na wama kwan saa, ɛnna woamma w’akoa anhu nea ɔbɛtena ahengua no so adi me wura ɔhene ade?” 28 Afei Ɔhene Dawid kae sɛ: “Momfrɛ Bat-Seba mma me.” Enti obegyinaa ɔhene anim. 29 Ɛnna ɔhene kaa ntam sɛ: “Sɛ́ Yehowa a ogyee me* fii ahohia nyinaa mu+ te ase yi, 30 sɛnea mekaa wo ntam wɔ Yehowa, Israel Nyankopɔn din mu sɛ, ‘Wo ba Solomon na obedi m’ade ayɛ ɔhene, na ɔno na obesi m’anan atena m’ahengua so!’ no, ɛnnɛ mɛma aba mu saa.” 31 Ɛnna Bat-Seba bɔɔ ne mu ase de n’anim butuw fam wɔ ɔhene anim kae sɛ: “Ma me wura Ɔhene Dawid nnya nkwa daa!” 32 Ntɛmpa ara na Ɔhene Dawid kae sɛ: “Momfrɛ ɔsɔfo Sadok, odiyifo Natan, ne Yehoiada+ ba Benaia+ mma me.” Ɛnna wɔbaa ɔhene anim. 33 Ɔhene ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Momfa mo wura nkoa nka mo ho na momma me ba Solomon ntena m’afurumpɔnkɔ* no so,+ na momfa no nsian nkɔ Gihon.+ 34 Momma ɔsɔfo Sadok ne odiyifo Natan nsra no ngo+ wɔ hɔ mfa no nsi Israel so hene, na mommɔ abɛn nka sɛ, ‘Ma ɔhene Solomon nnya nkwa tenten!’+ 35 Munni n’akyi mfa no mmra na ɔmmɛtena m’ahengua so. Ɔno na obedi m’ade ayɛ ɔhene, na ɔno na mɛyɛ no Israel ne Yuda kannifo.” 36 Ɛhɔ ara na Yehoiada ba Benaia ka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “Amen! Ma me wura ɔhene Nyankopɔn Yehowa nhyɛ mu den. 37 Sɛnea Yehowa dii me wura ɔhene akyi no, saa ara na onni Solomon akyi,+ na ɔmma n’ahengua nyɛ kɛse nsen me wura Ɔhene Dawid ahengua.”+ 38 Ɛnna ɔsɔfo Sadok, odiyifo Natan, Yehoiada ba Benaia,+ ne Keretifo ne Peletifo+ no siim kɔe; wɔmaa Solomon tenaa Ɔhene Dawid afurumpɔnkɔ no so+ de no kɔɔ Gihon.+ 39 Afei ɔsɔfo Sadok faa abɛn a ngo wom+ no fii ntamadan no mu+ na ɔsraa Solomon ngo,+ na wofii ase bɔɔ abɛn maa ɔman no nyinaa bɔ gyee so sɛ: “Ma Ɔhene Solomon nnya nkwa tenten!” 40 Ɛno akyi no, ɔman no nyinaa tu dii n’akyi, na wɔbɔɔ ntɛntɛbɛn dii ahurusi kɛse paa, na dede no maa asaase wosowee.+ 41 Adoniya ne wɔn a ɔfrɛfrɛɛ wɔn no nyinaa tee; saa bere no, na wɔadidi awie.+ Bere a Yoab tee mmɛn no nnyigyei no, ɛhɔ ara na obisae sɛ: “Na gyegyeegye bɛn na ɛrekɔ so wɔ kurom yi?” 42 Ogu so rekasa ara na ɔsɔfo Abiatar ba Yonatan+ bepuee hɔ. Ɛnna Adoniya kae sɛ: “Bra mu, na woyɛ onipa pa;* migye di sɛ wode asɛmpa na ɛbae.” 43 Ɛnna Yonatan buaa Adoniya sɛ: “Daabi o. Yɛn wura Ɔhene Dawid asi Solomon hene. 44 Na ɔhene maa ɔsɔfo Sadok, odiyifo Natan, Yehoiada ba Benaia, ne Keretifo ne Peletifo no kaa ne ho, na wɔma ɔtenaa ɔhene afurumpɔnkɔ no so.+ 45 Afei ɔsɔfo Sadok ne odiyifo Natan sraa no ngo sii no hene wɔ Gihon, na wɔde ahurusi fii hɔ bae, ɛno nti na kurow no mu ayɛ gyegyeegye no. Ɛho dede na motee no. 46 Afei nso, Solomon atena ahengua no so. 47 Bio nso, ɔhene nkoa baa hɔ behyiraa yɛn wura Ɔhene Dawid, na wɔkae sɛ, ‘Wo Nyankopɔn mma Solomon din nyɛ kɛse nsen wo din, na ɔmma n’ahengua nyɛ kɛse nsen w’ahengua!’ Ɛnna ɔhene bɔɔ ne mu ase wɔ ne mpa so. 48 Na nea ɔhene nso kae ni, ‘Ayeyi nka Yehowa, Israel Nyankopɔn a ɛnnɛ wayi obi atena m’ahengua so ama m’ankasa mede m’aniwa ahu!’” 49 Ɛnna ehu kaa wɔn a Adoniya afrɛfrɛ wɔn no nyinaa, na obiara sɔre faa ne kwan. 50 Adoniya nso, Solomon nti, ehu kaa no. Enti ɔsɔre kɔe, na okosoo afɔremuka no mmɛn mu.+ 51 Ɛnna wɔbɛbɔɔ Solomon amanneɛ sɛ: “Ɔhene Solomon ho hu nti, Adoniya akoso afɔremuka no mmɛn mu, na ose, ‘Momma Ɔhene Solomon nni kan nka me ntam sɛ ɔremfa sekan nkum n’akoa.’” 52 Ɛnna Solomon kae sɛ: “Sɛ ɔyɛ adepa a, ɛnde ne nwi baako mpo rentɔ fam, nanso sɛ odi bɔne a,+ ɛnde obewu.” 53 Enti Ɔhene Solomon soma ma wɔkɔfaa no fii afɔremuka no ho bae. Na ɔbɛkotow Ɔhene Solomon, na Solomon ka kyerɛɛ no sɛ: “Sɔre, na kɔ wo fi.”
^ Anaa “anka asɛm bi a ɛbɛhaw no ankyerɛ no.”
^ Anaa “na gye wo kra ne wo ba Solomon kra nkwa.”
^ Anaa “m’afurummere.”
^ Anaa “ɔbarima a ɔfata.”